बिहानको यी खराब बानीले तौल बढ्न सक्छ, व्यायामले पनि काम गर्दैन - E-BreakingNews
Home Swasthey बिहानको यी खराब बानीले तौल बढ्न सक्छ, व्यायामले पनि काम गर्दैन
बिहानको यी खराब बानीले तौल बढ्न सक्छ, व्यायामले पनि काम गर्दैन
e-Breaking News July 30, 2020 Swasthey,
आज भोलि सामान्य सामान्य भैसकेको छ, यसको कारण हो बदलिएको जीवनशैली हो। व्यक्ति न त सही समयमा सुत्छन न उठ्छन्। यस बाहेक, त्यहाँ अर्को कुरा छ जुन मोताउनुको सब भन्दा ठूलो कारण खाना हो। मानिसहरूले स्वास्थ्यकर खाना भन्दा बढी जंक फूडमा ध्यान दिइरहेका छन्। यो नै कारण हो कि मानिस मोतौदै गइरहेका छन्।
यद्यपि त्यहाँ केहि व्यक्ति छन् जसले आफ्नो वजन घटाउन जतिसक्दो प्रयास गर्छन्। यसका लागि, उनीहरूले स्वस्थ खाना पनि खान्छन् र बिहान व्यायाम पनि गर्छन्, तर केवल यी सबै गर्दा गर्दै पनि तपाईको तौल घटेको छैन भने सोच्नुस यसको कारण के हुन सक्छ?
वास्तवमा यसको पछाडि कारण तपाईंको बिहानको खराब बानी हुन सक्छ, जसलाई मानिसहरूले त्यति सार्हो ध्यान दिदैनन्। आउनुहोस्, जाने कि ती बानीहरू के हुन् जसले तपाईंको वजन घटाउन बाधा उत्पन्न गर्दछ। जान्नु होस् कारण हरु
ओछ्यान सफा नराख्नु
केही व्यक्तिहरूको बानी हुन्छ कि उनीहरू बिस्तरा सफा नगरी सुत्छन् र यस्तो काम सधै गर्छन्। एउटा अनुसन्धानले पत्ता लगाएको छ कि जो व्यक्ति नियमित रूपमा आफ्नो ओछ्यान सफा गरेर सुत्दछन्, उनीहरु राम्रो निद्रा पाउँछन् र तपाईलाई सचेत हुनुपर्दछ कि राम्रो निद्रा स्वास्थ्यको लागि लाभदायक छ। तसर्थ, नियमित रूपमा ओछ्यान सफा गर्नु राम्रो छ, त्यस पछि मात्र सुत्नुहोस्।
नियमित रूपमा चिया वा कफी लिने
बिहान बिहान केही खाजा खाँदा चिया वा कफि सेवन गर्नु स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन सक्छ, तर नेपालीहरु अधिकांश रुपमा चिया कफी बाटै दिनको सुरुवात सुरु गर्दछन्। यदि तपाईं वजन घटाउने सोच्दै हुनुहुन्छ भने, आफ्नो दिन बिहान मन तातो पानी बाट सुरुवात गर्नु पर्छ। अझ सके सम्म पानीमा कागतीको रस पनि थप्न सक्नुहुन्छ। यसले शरीरमा उपस्थित विषाक्त लाई हटाउँछ र यसले तौललाई नियन्त्रणमा राख्छ।
बिहानको घाम ताप्नु
के तपाईंलाई थाहा छ ? बिहानको घामले तपाईंलाई तौल घटाउन मद्दत गर्दछ? हो, वास्तवमा बिहानको सूर्यको किरणले शरीरमा भिटामिन-डीको कमीलाई पूरा गर्दछ। एउटा अनुसन्धानमा यो पत्ता लागेको छ कि भिटामिन-डीको कमी भएको व्यक्तिको पेटमा बोसो बढाउँछन् र कम्मर चाक्लो बनाउछ । जर्नल अफ क्लिनिकल एन्डोक्रिनोलजी एण्ड मेटाबोलिजममा पनि एउटा रिपोर्ट प्रकाशित गरिएको थियो, जसमा भनिएको छ कि भिटामिन-डीको कमी हुने महिलाको तौल बढाउँछ। त्यसकारण यो विश्वास गरिन्छ कि बिहानको घाम स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक छ। यसले तपाईलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्दछ।
राति अनिदो बस्नु अथवा अबेर सम्म नासुत्नाले पनि स्वास्थ्य बिगार्न सक्छ। वास्तवमा, रातिको नौ घण्टा भन्दा बढीको निद्रालाई ओभर स्लिपिंग मानिन्छ। यो देखिएको छ कि बढी वा कम निद्राले गर्दा, तौल कम हुनुको सट्टामा बढ्छ । तसर्थ, यदि तपाईं आफ्नो शरीर स्वस्थ राख्न चाहानुहुन्छ भने निद्राको आवश्यक मात्रा पुरा गर्नुहोस।
नोट: यो सल्लाह तपाईलाई सामान्य जानकारी प्रदान गर्न मात्र दिइएको छ। यस्तो काम गर्नु अघि तपाईले आफ्नो डाक्टर वा विशेषज्ञको सल्लाह लिनु पर्छ।